China nkenke ọkpọkọ ịkpụ Imepụta na Factory |Ọla Ọdịnihu
A na-ejikarị ngwaahịa ịkpụ nke ọkpọkọ igwe anaghị agba nchara n'ọtụtụ mpaghara dị ka ụgbọ ala, gwongworo, ụgbọ ala ndị njem, ụgbọ ala pụrụ iche, igwe ọrụ ugbo, ụgbọ oloko na-agba ọsọ ọsọ, akụrụngwa ụgbọ elu, ụgbọ mmiri, igwe ọdụ ụgbọ mmiri, igwe akwa, ike eletriki, geology na Ngwuputa. , kemịkalụ, na ngwa ngwa.
Future Metal pụrụ iche HC-6800D elu-nkenke tube ọnwụ igwe na-enyere aka ịkpụ akwa-na burr-free tube ọnwụ.Akụrụngwa a ziri ezi na nha nha, yana nnabata n'etiti 0.001-0.005.
Omume egosila na ọ bụrụ na a na-eji ngwá ọrụ ndị ọzọ dị ala mee ihe maka ịkpụ ma ọ bụ ịkwanye ọkpọkọ nke ọma, usoro ịkpụ na ịkpụcha ihe nwere ike ịmepụta obere mgbawa na ngalaba ahụ, nke ga-emetụta ịdịte aka na ike ike nke akụkụ ndị ahụ, si otú a na-akpata nsogbu. ahịrị ọkọnọ nke elu.
Ọ dabara nke ọma, ọ dịghị ihe ize ndụ nke ịkpụcha ihe ma ọ bụ kpọgidere burrs n'ihi na Future Metal na-eji ngwá ọrụ kachasị mma na-egbutu ọkpọkọ niile, wee jiri njedebe njedebe na OD/ID chamfer blades.
Na mgbakwunye, igwe anyị na-egbutu, ihu na chamfer n'otu ọrụ, na-abawanye mmepụta yana na-ebuli ọnụ ahịa.
nkọwa igbutu ọkpọkọ nkenke:
Ọkachamara Onye nrụpụta Steel Tube na China:
Nke gara aga: TS EN 10305-4 E235 E355 Oyi adọta tube ziri ezi na-enweghị nkebi.
Osote: Nkenke alloy ígwè anwụrụ
© Nwebiisinka 20022022: Ikike niile echekwabara. Colored Coil Color Coated Steel Roll Corrugated Metal Panels Galvanized Steel Pipe Galvanized Corrugated Sheet Colorful Steel Coil Color Coated Coil Ppgi Steel Coil Ppgi Coil Ppgl Coil Ppgi Steel Coils >